Iphupha elingasentla, isilingi Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Yeyayo yonke indlu kwaye inika abahlali ukhuseleko kwimozulu engathandekiyo njengemvula nomoya okanye ilanga kushushu ehlotyeni. Wonke umntu unokubona uphahla oluninzi emini xa beshiya indlu yabo bephuma ngaphandle.
Akumangalisi ke ukuba isilingi ihlala ibonakala ephupheni. Rhoqo uphawu lophupha "uphahla" ludityaniswe apho nesakhiwo esifana nendlu, ukuze iphupha libone uphahla lwendlu okanye uphahla lwegable, iithayile, iipali okanye i-eriyali. Kodwa mhlawumbi kananjalo "Oongqatyana babetha umlozi ngento esephahleni" - into yonke into el mundo yaziwa ixesha elide kwaye malunga noko kungasadingeki ukugcina imfihlo.
Kodwa kutheni uphupha isilingi kwaye yintoni i-subconscious yakho ekufuna ukukuxelela yona ngalolu phawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «isilingi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isilingi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isilingi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isilingi» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengenxalenye ebalulekileyo yezindlu, umsebenzi wophahla kukukhusela abahlali kwindalo, oko kukuthi, ukuzigcina zomile kwaye zishushu kwimvula nakwikhephu kunye nokubonelela ukuphola phakathi ehlotyeni xa ilanga likhanya. Oku Ukukhusela ukucinga idlala indima ebalulekileyo ekutolikeni amaphupha, yiyo loo nto kwiiyantlukwano ezininzi zomfanekiso wephupha izinto ezikhuselayo "zesilingi" zibandakanyiwe.
Ke ukuba usendlwini, iphupha lakho linokuthetha ukuba ungumzekeliso "Uphahla phezu kwentloko yakho" kwaye zikhuselwe kwizinto. Rhoqo, unokulichaza ngakumbi eli phupha, ukuze ungazikhuseli nje kuphela kwimozulu, kodwa nakwezinye iingozi kwaye Ubunzima yobomi bemihla ngemihla.
Ngaba isilingi iyawa ephupheni? Emva koko unokuziva ungenakunceda kwaye unenceba yomcimbi othile kwihlabathi eliphaphama.
Ngamanye amaxesha umntu umi eluphahleni ephupheni lakhe. Olu phawu lubonisa njengomthetho ukuba iphupha lomelele ngokwaneleyo, kwaye ngenxa yoko awudingi ukhuseleko longezelelekileyo ebomini bakho. Ukuba umi ecaleni kwaye ungaphantsi kophahla ephupheni lakho, ngekhe ungabinalo ukhuseleko oluyimfuneko xa uphaphile okanye ulilangazelela. ukhuseleko ngakumbi.
Ngelixa uphahla lukhusela wonke umntu ongaphantsi kwalo, lukwaluthintela nembono yesibhakabhaka. Ke ngoko, iphupha lakho, elimalunga nophahla, linokuqondwa ngendlela yokuba isilingi ikuthintele ekuphupheni nasekunqweneleni kwaye ngenxa yoko awunakufikelela kwiinkwenkwezi. Ukuba ubona intsika ephupheni exhasa ubume bophahla, kuya kufuneka wazi ngesiseko sakho sobomi.
Ukuba, ephupheni, umsitho wokugqiba ubanjwa emva kokuba ukwakhiwa kophahla kumisiwe, kunokwenzeka ukuba utshintsho okanye isiqalo esitsha senzeke.
Uphawu lwephupha «isilingi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umfanekiso wephupha utolikwa ngokomfuziselo, oko kunokwenziwa nakwisilingi. Ingqondo yomntu Kuthetha ukuba uvala umzimba, oko kukuthi, ukuya phezulu. Kule meko, iphupha lesilingi ikakhulu luphawu lwendlela esiphatha ngayo kwaye sicinge ngayo ngengqondo yethu.
Ngamanye amaxesha umfanekiso wephupha kufuneka ukhuthaze iphupha ukuba libe li-crazier kwaye likhawuleze ngakumbi kubomi bemihla ngemihla, ubuncinci libhentsise ngokufutshane intloko. Ngenxa yokuba isilingi njengomfanekiso wephupha ihlala iluphawu lwe Isimo sengqondo esinzima kakhuluapho ithuku nemvakalelo zihlala zingakhathalelwanga.
Ukuba uphupha uphahla oluvuzayo, kunokuba njalo ukungavumelani o Isiphithiphithi zivelise kwingqondo yakho. Ke mhlawumbi kuya kufuneka u-odole ngcono kwaye uzilungelelanise iingcinga zakho okanye, phantsi kweemeko ezithile, "gqwetha" iingcinga zakho kancinci. Ukuba ubona i-gutter evaliweyo eluphahleni, ngokweetoliki zengqondo, oku kubonisa ukuvaleka kwengqondo.
Uphawu lwephupha «isilingi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha ngokwasemoyeni kophahla nako kukhuseleko. Apha, nangona kunjalo, iphupha ngokuyintloko limela ukhuseleko ukuba abafazi bangaphambili banikwe amadoda njengabagcini beziko.